Filatamtoota haaraa federeeshinichaarraa hojii guddaatu eegama
Kubbaan miilaa ispoortiiwwan biyya keenyatti beekamoo ta'aniifi jaalatamummaa qaban keessaa hangafummaadhaan kan eeramu yoo ta'u, sadarkaan irratti argamu garuu hanga hangafummaasaa guddatee kan mul'atu miti.
Guddinni dinagdee biyyattii sochii ispoortii fiixaan baasuu dhabuunsaa sababiiwwan dadhabbina kubbaa miilaatiif eeraman keessaa isa tokko yoo ta'ellee, hundarra garuu oggansi federeeshinichaa tarkaanfii tokko fuulduratti butuu dhabuunsaa sababa olaanaa akka ta'e hunduu irratti waliigala.
Wayita ammaa sadarkaan kubbaa miilaa biyyattii akka ardii Afrikaattis ta'e addunyaatti qaaneffachisaa ta'ee itti fufuunsaa ammoo oggansa federeeshinichaa gaaffii keessa galchee jira. Kunimmoo kufaatii hamaa waan ta'eef guddina kubbaa miilaa biyyattii quucarsaa kan jiru ta'uusaa mul'isa jechuudha.
Addunyaarraa sadarkaa 142ffaa, Afrikaarraa ammoo sadarkaa 44ffaa qabachuun biyyoota muraasa of duuba gootee dhumarratti akka argamtu odeeffannoowwan 'FIFA fi CAF' toora weebsaayitiisaaniirratti yeroo yeroodhaan ifa godhanirraa hubachuun kan danda'amuudha.
Rakkoolee guddina kubbaa miilaa keessatti akka hinfuramneef wantoota akka sababaatti ka'an keessaa inni olaanaan, oggantoonnii federeeshina kubbaa miilaa durumarraa kaasanii tasgabbiidhaan gadi taa'uun waadaa mootummaafi ummanni isaanitti kenne hubannaadhaan bahatanii waan hinbeekneefidha.
Keessumattuu waggootan 27 darban keessatti wayita filannoon pirezidaantummaafi koree raawwachiiftuu federeeshinchaa dhihaatu wal ugguruuniifi kilabootni dirree dorgommii keessatti walitti bu'uun, akkasumsa abbaa seeraa waliin waljeequun amala badaa baramaa turedha.
Yeroo ammaas mul'ataa kan jiru diraamaa dhuma wal fakkaatudha. Haalli kun ammoo guddina ispoortii kubbaa miilaa biyya keenyaa quucarsuudhaan gareen kubbaa miilaafi kilaboonni wayita tapha biyyooleessaa taasifatan yeroomaan mo'amuudhaan gulaalaa ala akka ta'an taasiseera. Kunimmoo ummataafi mootummaa abdii kutachisaa kan jiru ta'uusaati jechuudha.
Kilaboonni liigii piriimeerifi liigii biyyaaleessaa sababii waldhabiinsi koree federeeshinichaa jiddutti uumamanirraa kan ka'e walmorkiiwwan sagantaasaanii eeggatanii akka hinadeemsifamne godheera. Kunis, yeroo gabaabaa keessatti bajeta isaanii fixuudhaan akka diigaman taasiseera; taphattoonnis bittinnaa'uun rakkoo hawaas-dinagdeef akka saaxilaman gochuu danda'eera.
Kana furuuf mootummaan ji'a Onkoloeessaa bara 2010 Koreen Federeeshina Kubbaa Miilaa Itoophiyaa haarofti akka filatamu qajeelcha baasuus ji'oota torba darbaniif wal unkuraa turuudhaan Dilbata darbee filannoonni pirezidaantummaafi koree raawwachiiftuu hojii adeemsifameera.
Filannoo magaalaa guddoo Afaar, Samaraatti adeemsifame kanatti bakka bu'aan Oromiyaa Obbo Isaayaas Jiraa Pirezidaantii Federeeshina Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uudhaan sagalee 78tiin filamaniiru.
Obbo Isaayaas umrii isaanii guutuu ispoortii waliin dhiheenyatti kan wal beekaniidha. Yeroo dargagummaasaanii ispoortii addaddaa keessatti hirmaachuudhaan manneen barumsaafi kilaboota adda addaatti bakka bu'uudhaan dorgomaa turaniiru.
Akkasumas naannoo Oromiyaatti leenjisaa dura adeemaafi pirezidaantii kilaboota adda addaa ta'uudhaan muuxannoo olaanaa akka qabanis seenaasaaniirraa hubachuun danda'ameera.
Kanarraa ka'uun rakkoolee guddina ispoortii kubbaa miilaa biyyaa keenyaa ni furu jedhamuun itti gaafatamummaan mootummaafi ummatarraa itti kennameera.
Koloneel Awal Abdurahamis Ittaanaa pirezidaantii federeeshinichaa ta'uun filamaniiru.
Koree raawachiiftu hojii federeeshinichaaf ammoo addee Soofiyaa Almaamu,Obbo Zarihun Qaqqaboo, Obbo Abbabaa Galaagaayi, Obbo Alimiraahi Mahaammad, Obbo Sawunat Bishaawu, Obbo Abduraazaaq Hassan, Obbo Ibraahim Mahaammad, Obbo Yooseef Tasfaayeefi Obbo Chaangaat Kooti waggootan afur dhufaniif tajaajila kennuuf filamaniiru.
Koreen haarawaa kunneen ispoortii kubbaa miilaa biyya keenyaa kan magaaloota adda addaafi naannooleetti adeemsifamaa jiran tasgabbeessuufi bu'aa qabeessa taasisuuf hojii guddaatu isaanirraa eegama.
Tuesday, 12 June 2018 22:17
Tuesday, 12 June 2018 22:16
Keellaa Fayyaa Arrabasaa Cifaaraa
“Aanaan Jiddaafi gandoonnishii horsiisa looniitiin beekamu. Dur oggaa loon dhokkubsatan haamtuufi maarsashaa ibiddaan ho'isuun gubaa turre. Haadha ciniinsuun qabe dur sireedhaan baannee mana yaalaa geessuuf daandii dheeraa deemaa turre” jechuuni Gaazexaa Bariisaatti kan himan.
“Har'a Waldaa Misooma Oromiyaatiin kiliniikni wal'aansa beeladaafi keellaan fayyaa dubartoota balbala keenyarratti nuu banamuunsaa daran nu gammachiise” kan jedhan Godina Shawaa Kaabaa, Aanaa Jiddaatti jiraataa ganda Arrabsaa Cifaaraa kan ta'an maanguddoo waggaa 62, Obbo Geetaachoo Dubreeti.
“Saawwan 36fi hoolota hedduun qaba. Saawwan kanneen wal'aansifachuuf aanaa ollaa, Waacaalee oofnee dhaqaa turre. Har'a hojii WMOtiin loon otoo hintaane namatu du'aa ka'e. Hoolaa bishaan garaatti guduunfame ogeessa biraan gahuuf rakkataa turre. Kiliniikni kun dafee hojii eegaluu qaba” kan jedhan ammoo qonnaan bulaa Girmaa Argaawu.
Ogeettiin ekisteenshinii fayyaa Ganda Arrabsaa Cufaa, Dubree Birihaanee Waldee gamashiitiin ogummaa kanaan waggoota saglan darbaniif keellaa fayyaa biraa keessa tajaajilaa turuushii eertee, keellaan fayyaa WMOdhaan haala haaraadhaan ijaarame kun tattaaffii du'aatii haadholiifi daa'immanii hir'isuuf taasifamu keessatti shoora olaanaa akka qabu eertu.
Isheefi miiltoowwanshiis keellaa fayyaa ammayyaa meeshaaleen akka diilalleessaa, iddoo bilqaaxiin ittigatamuufi kutaan qorichaafaa guutamaniif kanatti haadholiifi daa'imaniif tajaajila barbaachisu kennuuf qophii ta'uu eertee, kutaan dubartoonni eddii da'anii booda aara itti galfatan ykn keessa turan dabalataan otoo jiraatee gaariidha jette.
Fedhiin haadholiin keellaawwan fayyaatti da'uuf qabanis daran dabalaa dhufuu muuxannooshii duriirraa ka'uun kan ibsitu ogeettiin fayyaa tun, tajaajilli kun caalaatti ummata bira akka gahuuf hanga humni danda'een keellaawwan fayyaa dabalataa otoo ijaaramanii misha ta'uu dubbatti.
Ogeessi Kiliniika Beeladaa Arrabsaa Cifaaraa, Doktar Taarikuu Garbaabaas kiliniikichi bakka jiraattota gandoonni hedduuf jiddugala ta'etti ijaaramuusaa eeranii, meeshaaleen hanga tokko dhiyaachuusaanii ibsu.
Kiliniikichi akka hojii eegaluuf meeshaaleen akka diilalleessaa, humni ibsaa, teermoo meetrii, meeshaaleen baqaqsanii hodhuufaan ittiin raawwatamuufi kkfn sadarkaasaa eeggatan akka guutamaniifiif kan gaafatan ogeessichi, guyyaatti hanga beeladoota 100 oliif tajaajila wal'aansaa kennuun akka danda'amu dubbatu. Talaallii ammoo hanga kuma tokkoofi 500tti kennuun ni danda'ama jedhaniiru.
WMOtti duraan garee hordoffiifi gamaggamaa, Obbo Hundee Xilaahun gamasaaniin, Aanaa Jiddaatti hojiin pirojektota adda addaa 37 qarshii miliyoona 32 geggeeffaa jiraachuu eeranii, ummanni naannawaa kuma 71 caalu kan fayyadamu ta'uu ibsaniiru.
Tuesday, 12 June 2018 22:13
Tuesday, 12 June 2018 22:11
Tuesday, 12 June 2018 22:09
Baadimmeefi waliigaltee Aljersi
Itoophiyaafi Eertiraan waggoota 27 darbaniif guutummaatti nagaa argatanii hinbeekan. Guutummaattis waraana keessa kan hingalle, garuu ammoo walqoccollaafi waldoorsisaa hanga har’aa turuunsaanii kan beekamuudha.
Kanarraa kan ka’e xiinxalootni siyaasaa guutummaaatti nagaas; waraanas miti ('no peace no war') jechuun waamaa turaniiru. Kunimmoo sirna mootummaa biyyoota lameenii gidduutti garaagarummaa guddaa waan uumeef, lammiileen Itoophiyaafi Eertiraa baroota hedduuf waliin jiraataa turan osuma waljaalatanii dirqamaan walitti akka hindhufne dhorkamaa turaniiru. Kun hanga har’aattillee ittuma fufee jira.
Rakkoo kana furuuf Dhaabbanni Mootummoota Waltanii Mootummootni Walta'anii (DhBMW)yaaliiwwan adda addaa taasisaa turanis milkaa’uu hindandeenye. Kunimmoo baroota darban keessatti ejjennoon mootummoota lameenii abbummaa Baadimmeerratti qabaniin waldhiittaan waan tureef hariiroon Itoophiyaafi Eertiraa akka hinfuramne hanga har’aatti hudhee kan qabeedha.
Dhimmuma kana hundeerraa furuuf koreen raawwachiistuu hojii Adda Warraaqsa Dimokraasummaa Ummattoota Itoophiyaa (ADWUI) Kibxata darbe walga’ii idileesaa gaggeeffateen, waliigalteen Aljersi Baadimmeen kan Eertiraa ta’uu murteesseefi daangaarratti murtee komishinii DhBMW dhimma daangaa biyyootaarratti hojjetuun waggoota digdama dura murteeffame guutummaatti fudhachuun hojiirra oolchuuf murteessuusaa beeksiseera.
Sababa kanaanis bal’inaan ibsa kan kenne yoo ta’u, “Ummattootni biyyoota lameenii faayidaa qofaan osoo hintaane dhiigaan waan walitti hidhamaniif mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Aljersiifi murtee komishinichaa guutummaatti fudhatee hojiitti hiikuuf, akkasumas hojiirra oolmaasaa kutannoon kan hojjetu ta’uu ibseera.
Mootummaan Eertiraas ejjennoo Itoophiyaa fudhachuun yaada nagaa calaqqisiisuu akka qabu gaafatameera. Kanas yoo ibsu, “Mootummaan Eertiraas ejjennoo walfakkaatu fudhachuun haalduree tokko malee waamicha keenya gaarummaan ilaaluun hariiroo gaarii kanana ummattoota obboleewwan lamaan gidduu ture iddootti deebisuuf akkasumas hojiirra oolmaasaa shakkii tokko malee akka hojiirra oolu ni gaafanna!” kan jedhu ture.
Hariiroo biyyoota lameenii fooyyessuuf waggoota digdamman darban keessatti tattaaffiiwwan garagaraa taasifamanis osoo hinmilkaa’iin waan hafeef waliin jireenya lammiileerratti dhiibbaa guddaa uumaa tureera. Kana hambisuufis ejjennoo kanaan duraarra adeemsaafi tooftaa addaatu barbaachisa jechuun Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad ummata Itoophiyaaf ibsaniiru.
“Yeroo hundumaa lammiilee daangaarra jiraatanirratti akka hintasgabboofne gochuun sodaaf isaan saaxileera. Waggoota digdamman darban keessatti dhiibbaa hawaas-dinagdeefi siyaasaa geessisaa tureera. Hariiroon biyyoota lameenii fooyya’uunsaa nagaafi tasgabbii biyyoota Afrikaa Bahaatiif furmaata waaraa ta’a” jechuunis hubachiisaniiru.
Murtee ADWUIn dabarse kana ilaalchisee paartiileen siyaasaafi hayyuuleen adda addaa yaada Gaazexaa Bariisaafi Addis Zamaniif kennaniin deggarsaafi sodaa qaban ni eeru.
Obbo Tigistuu Awwaluu dura taa’aa Paartii Andinnat yoo ta’an, waggoota digdamaa booda murteen akkasii darbuunsaa gaariidha jedhu. Keessumaa ejjennoon mootummaa Eertiraa ifatti kan beeksifamu taanaan tarkaanfichi hariiroo biyyoota lameenii sirnaan fooyyessuu danda’a. Kunimmoo baroota darban keessa hawwamaa kan tureedhaa jedhu.
Haa ta’u malee, ADWUIn marii ummataa malee akkuma tasaa walga’ii gaggeesseen lafa Baadimmee Eertiraaf dabarsuuf murteessuunsaa balaa qabaachuu danda’a jechuun sodaa qaban ibsu.
Kunis, waliigaltee Aljersirratti Komishiniin Dhimma Daangaa Biyyoota Addunyaa eegsisu ragaalee sirna kolonii bu’uureffachuun Baadimmeen kan Eertiraa ta’uu murteesse hanga har’aatti gama mootummaa Itoophiyaatiin mormiin taasifamaa tureera.
Ummatni laficharra jiraatu lammii Itoophiyaati. Fedhiin uammata kanaas daangaa Itoophiyaa keessatti qabamanii jiraachuu akka ta’e himamaa tureera jechuun ibsu.
Lafti kan Eertiraa yoo ta’e, lammiileen achirra jiraatan gara kamitti cituu akka danda’an sirnaan ilaaluun barbaachisaadha jedhu.
Kana gochuuf ammoo mootummaan Itoophiyaa yaadaafi fedhii ummataa bu’uureffachuun murteessaa ta’uu yaadachiisu. Ejjennoon mootummaa Eertiraas dhaabbii waan hinqabneef kallattii hundaan xiinxaluun hundarra fala ta’aa jedhu. Paartiileen siyaasaas gahee irraa eegamu bahachuu akka qaban gorsu.
Yunivarsiitii Maqalee kutaa saayinsii siyaasaatti Gargaaraan Pirofesaraa Marasaa Tsahaayi gaafdeebii Gaazexaa Addis Zaman waliin taasisaniin, waliigaltee Aljersi ilaalchisee duras ta’e Itoophiyaan fudhachuu kan didde murteessaa osoo hintaane adeemsa hojiirra oolmaasaati jechuun yaadatanii, ammas wanti haaraan kan hinuumamne ta’uu dubbatu.
Kunis, akkuma kanaan dura barame Itoophiyaan naannawichatti fedhii nagaafi tasgabbiin akka uumamu dabalataan waan barbaadduufi, jedhu.
Dhimmi murteessaan garuu murteen kun maaliif amma barbaadame kan jedhu yoo ta’u, wayita ammaa mootummaan Ameerikaa walitti bu’iinsi Itoo-Eertiraa yeroo kamirrayyuu caalaa furmaata akka argatuuf dhimmamuurratti akka argamu dubbatu. Kunimmoo fedhiin Ameerikaan Kaabaa, Ruusiyaafi Chaayinaan biyyoota Afrikaa bahaarratti qaban daran guddachuusaa kan mul’isuudha jedhu.
Kanaaf, hojiirra oolmaan murtichaa dhiibbaa biyyoota kanneeniitiin akka hintaaneef mootummaan eeggannoo guddaadhaann raawwachuu akka qabu yaadachiisu.
Kanas ta’e sana Itoophiyaan murtee hineegamne dabarsuun fedhii nageenya waaraatiif qabdu ifatti beeksifteetti. Kunis sababoota mootummaan Eertiraa tarreessaa tureef deebii quufsaa kan kenne ta’uunsaas amanameera.
Mootummaan Eertiraas ejjennoo walfakkaatu qabachuun deebii kennuu yoo dhabe kufaatiin siyaasa biyyoota lameeniirra dhaqqabuu akka danda’u hayyuuleen kunneen ni tilmaamu. Waliigalteerra geenyaan garuu waliin jireenyi ummattootaa hunda ol cimee kan itti fufuudha. Kan ta’uu qabus kanuma jedhan.
“Jaarmiyaa Oromoo cimaa tokko ijaaruuf kutannoon qabnu olaanaadha” - Obbo Leencoo Lataa
Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADOn) Obbo Leencoo Lataatiin ogganamu eddii hundaa'ee waggoota muraasa lakkoofsiseera. Addichi waggoota kanneen keessatti qabsoo dimokraatawaa gochuuf tattaaffii olaanaa taasisaa akka tureefi jiruudha waltajiilee adda addaarratti ibsamaa kan jiru.
Tattaaffii karaa dimokraatawaa qabsaa'uuf taasisaa tureen haalli Itoophiyaa keessa ture mijataa ta’uu dhabuusaatiin hanga waggaa shaniitti biyya alaa keessa socho’uun hojiisaa hojjechaa guyyaa eeggachaa tureera.
Babal’achuu sassaabdummaa kiraafi rakkoo bulchiinsa gaarii waliin walqabatee haalli biyyittii waggoota sadiif raafama siyaasaa keessa kan ture yoo ta’u, haaromsa gadi fagoo taasifamaa tureen haalli mijataan ummata fayyadamaa taasisuufii paartiilee morkattootaa hawwatu karaa mootummaa diriiruusaan yeroo ammaatti biyyaatti deebi'ee karaa nagaatiin qabsaa'uuf tattaaffii taasisaa jira.
Gaafdeebii Gaazexaan Gaazexaan Bariisaa haala yeroo ammaa jilli ADO Obbo Leencoo Lataatiin durfamuufi gara Itoophiyaa dhuferratti miseensa Koree Raawwachiistuu Hojiifi Ittigaafatamaa Dhimma Jaarmayaafi Dubbii Himaa Jaarmayaa ADO, Doktar Bayaan Huseen Asoobaa waliin taasise akka armaan gadiitti dhiyaateera.
Bariisaa: Anaa dhufu! Baga gara biyya dhaloota keessaniitti deebitan! Erga biyyaa baatanii waggoota meeqa lakkoofsistan?
Doktar Bayaan: Baga nagaan nu eegdan! Erga dachee Oromiyaarraa fagaadhee waggoota 33 lakkoofsiseera. Kunoo guyyaan geenyaan har’a biyyatti deebi'eera. Aarris baasneerra.
Bariisaa: Isinis ta’e jilli keessan dur qabsoo hidhannoo ABO waliin turtan yeroo ammaa ammoo karaa dimokraatawaa qabsaahuuf maqaa ADOtiinn socho’aa jirtuutii ADOn yoom hundaa'e? Kaayyoon dhufuu keessaniis maalinni?
Doktar Bayaan: Erga maqaa ADOn qabsoo dimokiraatawaa eegallee waggoota shan lakkoofsisneerr. Haata’uutii kanaan dura gara biyyaatti dhufnee qabsoo keenya karaa dimokratawaan geggeessuuf haalli mijataan hinturre. Amma ammoo waamicha Itoophiyaa paartiilee maorkattootaatiif taasiseen dhufneerra.
Bariisaa: Gara Itoophiyaatitti wayita dhuftan maal galaaffatataniiti? Mootummaa Itoophiyaa wajjin akkamiin hojjettu?
Doktar Bayaan: Wanni addi keenya qabatee socho’u qabsoo sabdaneessaa Itoophiyaa keessatti daa’imummaarra jiru kana daran cimsuuf karaa dimokiraatawaa ta’een qabsaa'uuf kaayyeffannee sochoona.
Inni lammaffaan qabsoon keenya qabsoo hidhannoorraa bilisa ta’eefi karaa nagaa taasifamuudha.
Inni sadaffaan qabsoo dimokraatawaan taasisnu ija godhachuu kan danda'u biyya keessatti yoo qabsoofne ta’uu hubannee yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa waliin haasa’aa jirra.
Bariisaa: Simannaa mootummaa Itoophiyaatiin isiniif taasifame akkamiin ibsitu?
Doktar Bayaan: Itti gammadneerra. Fuuldurattis haala amma jalqabame kanaan yoo hojjetan jijjiiramni dhufuu danda'a.
Bariisaa: Paartiilee Oormoos ta'ee kanneen biroo wajjin hojjechuuf paartiin keessan hammam qophiidha?
Doktar Bayaan: Dhimmichi dhimma biyyaa hanga ta’etti kanneen nu waliin hojjechuuf fedhii qaban wajjin qindoofnee hojjechuuf duubatti hinjennu. Kana malees jaarmaayaalee Oromoo bakka bu’uun qabsaa'aa jiran waliin hiriirree jaarmiyaa Oromoo cimaa tokko ijaaruuf kutannoon qabnu olaanaadha.
Bariisaa: Biyya keessan akkamiin ilaaltaniree?
Doktar Bayaan: Kkkkkk biyya reefu seenna waan ta'eef sirriitti hinilaalle. Finfinneetti ummanni baay'ateera. Magaallattiinis jijjiiramteetti. Isa hafe ammoo xiqqoo turree itti deebina.
Bariisaa: Bulchiinsa haaromsaa kana akkamiin madaaltan mee?
Doktar Bayaaan: Jajjabeessaadha. Sochiin jalqabame kun cimee yoo ittifufe morkattootaafis ta’e hawaasa biyyattiif ijaarsi dimokraasii sabdaneessaa qabatamaan lafa qabachuu danda'a. Fedhiin keenyas kun akka dhugoomuudha.
Bariisaa: Yeroo keessan aarsaa gochuun gaafdeebii nuwaliin taasistaniif galatoomaa!
Doktar Bayaan: Gaazexaan Bariisaa seena qabeettiidha. Sochii taasisaa jirtan cimsaa ittifufaa. Ija ummataa ta’aa, horaa bulaa!
Tuesday, 12 June 2018 21:55
“ Siyaas dinagdee ummata Oromoo cimsuuf waliin hojjenna!” -DhDUOfi ADO
Oggantoota DhDUOfi ADO wayita marii adeemsisanitti
Gareen jilaa Adda Dimokraatawaa Oromoo (ADO) miseensota shan qabu waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseef fudhachuun dhiyeenya kana gara biyaa dhufuunsaa ni yaadatama. Jilli kun karaa nagaafi dimokraatawaa ta'een qabsaa'uuf qaamolee mootummaa federaalaafi naannoo Oromiyaa waliin marii adeemsisaa jira.
Gareen jilichaa, Obbo Leencoo Lataatiin durfamu erga biyya seenee Ministira Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad waliin marii adeemsiseera. Addichi Dilbata darbe hoggantoota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa (BMNO), DhDUO, abbootii Gadaa, maanguddoota, hayyoota yuunversiitiiwwan garagaraafi qeerroo waliin galma Wajjiira Pirezidaantii BMNOtti mari'ateera.
Dura taa’aa ittaanaa DhDUOfi Pirezidaantiin BMNO, Obbo Lammaa Magarsaa sirna marichaarratti akka jedhanitti, bilisummaa, mirkaneeffannaa abbaa biyyummaa, siyaas-dinagdee, hawaasummaa, dimookraasii, walqixxummaa, jaalalliifi obbolummaan wiirtuu qabsoo ummata Oromooti. “Bitaanis kori, mirgaanis kori walgeettiin kooruma” jedhee mammaaka Oromoon.
Galmi qabsaa’ota dhaabbilee siyaasaa Oromoo biyya keessaas ta’e alaa bilisummaa, walqixxummaa, dimokraasii, misooma, nageenya, fayyaa, qaroomina walumaagalatti fedhii, faayidaafi mirga ummata Oromoo eegsisuudha. Kaleessi seenaa gaariis ta'u gadhee galmeessee darbeera. Har’a ilaalchanis ta’ee gochaan gara boqonnaa haaratti ceeneerra jedhu.
Dukkanni kaleessaa, maraammartoon siyaasaa kaleessa keessa turre fedhiifi faayidaa ummata keenyaa quucarse. Nuti ilmaan abbaafi haadha tokkooti; ilmaan abbaa Gadaati. Ba’aa ummata keenyaa walgargaarree waliin baachuun dhaloota haaraa bor nu bakka bu’uuf bu’uura buufna. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos walwaamuun waldhagahanii walitti dhufuu eegalaniiru. Kun ummata Oromootiif gammachuu guddaadha; injifannoo olaanaadha jedhu Obbo Lammaan.
Har’a bakka kaleessaa hinjirru. Qabsoo qabsaa’onni Oromoo hangafaa, qeerroofi qarreen taasisaa turan wareegama guddaa kaffalchiisus firii boonsaa argamsiiseera jechuun, bu'aawwan galmaa'aa jiran kunuunfachuun egeree Oromiyaafi Itoophiyaa haaraa murteessuuf taasifamaa jiru tumsuun barbaachisaa ta'uu eeru.
Bu’uuruma kanaan DhDUOfi ADOn miira obbolummaafi tokkummaatiin dhimmoota fedhiifi faayidaa ummatasaanii mirkaneessuuf gahee irraa eegamu bahachuu akka qaban yaadachiisu.
Dhaabbileen siyaasaa hafanis simatanii dhimma fedhii, faayidaafi tokkummaa ummata Oromoo cimsanirratti waliin hojjechuuf qophii ta'uu kan himan Obbo Lammaan, dirreen siyaasaa yeroo ammaa jirus kanaaf haala kan mijeesse ta'uu dubbatu.
Dura taa’aan ADO Obbo Leencoo Lataa gamasaaniitiin akka jedhanitti, kaayyoon dhufaatiisaanii aangoo barbaachaaf osoo hintaane siyaas-dinagdee Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuufi. Waamicha mootummaan taasiseef kabajuun sabasaanii waggoota dheeraaf irraa gargar ba'anii turanii waliin walarguusaaniitti gammaduusaaniis ni eeru.
Gara fuulduraatti ummata Oromoo hunda haasofsiisuuf qophaa’aa jiraachuus ni dubbatu. Dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho’aa jiran biroonis waamicha kana kabajuun dhufanii fedhiifi faayidaa ummata Oromoo mirkaneessuuf akka hojjetaniif dhaamuusaanii odeeffannoon Biiroon Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaa irraa arganne ni ibsa.
Walumaagalatti akkuma, “Namni mana tokko ijaaru, citaa walhinsaamu” jedhamu san dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'anii biyya keessaafi alaa jiran hundinuu tokkummaadhaan fedhiifi faayidaa ummatichaa mirkaneessuuf hojjechuut irraa eegama. Mootummaan federaalaas ta'e naannichaa dirreen siyaasaa biyyattii kana caalaatti akka babal'atuuf hojiilee eegalan cimsanii ittifufsiisuu qabu.
Torban kana/This_Week 8352
Guyyaa mara/All_Days 1817772